အငျဒိုနီးရှားမှာတောကျပမယျ့ကွယျတဈပှငျ့ နှငျ့ သားအတှကျ ကတြဲ့မကျြရညျ - 9style
Home/အထွေထွေဗဟုသုတ/အငျဒိုနီးရှားမှာတောကျပမယျ့ကွယျတဈပှငျ့ နှငျ့ သားအတှကျ ကတြဲ့မကျြရညျ
အငျဒိုနီးရှားမှာတောကျပမယျ့ကွယျတဈပှငျ့ နှငျ့ သားအတှကျ ကတြဲ့မကျြရညျ
သားရေ….အမေတို့ဘဝရဲ့ဖြစ်တည်မှုလေးဟာ အလွန်တရာမှကို ဆန်းကျယ်ခဲ့ရတယ်။ကမ္ဘာမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအများဆုံးဟု ဂုဏ်ယူလေ့ရှိတဲ့နိုင်ငံမှာလူသားအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့ရတယ်နော်။
စာပေကျမ်းဂန်များအရ အမေတို့ရဲ့နေရာလေးဟာ ပဋိရူပဒေသဝါသဆိုတဲ့နေရာဒေသထဲမှာ မပါခဲ့ပေမယ့်လဲသားနဲ့အမေတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရေစက်ကအထုံပါရမီလွှမ်းခြုံခဲ့လေတော့ဗုဒ္ဓဓမ္မအငွေ့အသက်တွေက သားနဲ့အမေရင်မှာ ကိန်းအောင်နေခဲ့။
သားနဲ့ အမေ မြန်မာပြည်ကို အတူလာပြီး တရားရိပ်သာဝင်တော့ ပျော်နေတဲ့သားက ကိုရင်ဝတ်နှင့် အမြဲနေချင်တယ်ပြောတော့ မေမေမှာ ဝမ်းနည်းဝမ်းသာဖြစ်ခဲ့ရတာပေါ့။
မိဘမေတ္တာနှင့် သဒ္ဓါတရားတို့ လွန်ဆွဲပွဲမှာ သဒ္ဓါတရားဘက်က အနိုင်ရသွားခဲ့တယ်။အမေ သားကို မြစင်္ကြာကျောင်းမှာအပ်ခဲ့ပြီး ပြန်အလာလေယာဉ်ပေါ်မှာ မေမေငိုခဲ့ရသေး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီတုန်းကကျခဲ့တဲ့ မျက်ရည်နှင့် ခု ကျနေတဲ့မျက်ရည်တွေဟာ မတူပါဘူးသား။
အမေတစ်ယောက် သားကိုချန်ထားခဲ့ရလို့ ကြေကွဲမျက်ရည်နှင့် ခုသားလေးအောင်မြင်လို့ ကျနေတဲ့မျက်ရည်က ပီတိမျက်ရည်တွေပါ။
ဘာကြောင့်လဲလို့ သားမမေးတော့ဘူးလား?အမေ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆု ရလို့လား? Noဘီလျံနာသူဌေးမ စာရင်းဝင်လို့လား? No။မဟုတ်ရပါဘူးသားရယ် ဒါတွေက မေမေရဲ့အဖြစ်ချင်ဆုံးအိမ်မက်တွေ မဟုတ်ပါဘူးသား။@သားလေးရဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲ အောင်မြင်ခဲ့ရတဲ့ သာမဏေကျော်အလင်္ကာရဘွဲ့ရတာရယ်၊@သားရဲ့ စာသင်.စာချဆရာတော်တွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အသွင်ရှိတဲ့ နိုင်ငံသို့ ပင့်ဆောင်ပူဇော်ခွင့်ရခဲ့လို့ပေါ့။
အင်ဒိုသာမဏေကျော်ရဲ့မိခင်နေရာမှာ စိတ်ကူးပုံဖော် ရေးဖွဲ့ပါသည်။အလင်္ကာရပူဇော်ပွဲ အမှတ်တရအနေနဲ့ပါငယ်ချင်း။(ပညာစက်ဝန်း) ၈:၃၆။၃၀၊၁။၂၀၁၈။Credit-myanmarlibary
သားရေ….အမတေို့ဘဝရဲ့ဖွဈတညျမှုလေးဟာ အလှနျတရာမှကို ဆနျးကယျြခဲ့ရတယျ။ကမ်ဘာမှာ အစ်စလာမျဘာသာဝငျတှအေမြားဆုံးဟု ဂုဏျယူလရှေိ့တဲ့နိုငျငံမှာလူသားအဖွဈ ရပျတညျခဲ့ရတယျနျော။
စာပကေမျြးဂနျမြားအရ အမတေို့ရဲ့နရောလေးဟာ ပဋိရူပဒသေဝါသဆိုတဲ့နရောဒသေထဲမှာ မပါခဲ့ပမေယျ့လဲသားနဲ့အမတေို့ရဲ့ ဗုဒ်ဓဘာသာရစေကျကအထုံပါရမီလှမျးခွုံခဲ့လတေော့ဗုဒ်ဓဓမ်မအငှအေ့သကျတှကေ သားနဲ့အမရေငျမှာ ကိနျးအောငျနခေဲ့။
သားနဲ့ အမေ မွနျမာပွညျကို အတူလာပွီး တရားရိပျသာဝငျတော့ ပြျောနတေဲ့သားက ကိုရငျဝတျနှငျ့ အမွဲနခေငျြတယျပွောတော့ မမေမှော ဝမျးနညျးဝမျးသာဖွဈခဲ့ရတာပေါ့။
မိဘမတ်ေတာနှငျ့ သဒ်ဓါတရားတို့ လှနျဆှဲပှဲမှာ သဒ်ဓါတရားဘကျက အနိုငျရသှားခဲ့တယျ။အမေ သားကို မွစင်ျကွာကြောငျးမှာအပျခဲ့ပွီး ပွနျအလာလယောဉျပျေါမှာ မမေငေိုခဲ့ရသေး။ ဒါပမေယျ့ အဲဒီတုနျးကကခြဲ့တဲ့ မကျြရညျနှငျ့ ခု ကနြတေဲ့မကျြရညျတှဟော မတူပါဘူးသား။
အမတေဈယောကျ သားကိုခနျြထားခဲ့ရလို့ ကွကှေဲမကျြရညျနှငျ့ ခုသားလေးအောငျမွငျလို့ ကနြတေဲ့မကျြရညျက ပီတိမကျြရညျတှပေါ။
ဘာကွောငျ့လဲလို့ သားမမေးတော့ဘူးလား?အမေ ငွိမျးခမျြးရေးနိုဘယျဆု ရလို့လား? Noဘီလြံနာသူဌေးမ စာရငျးဝငျလို့လား? No။မဟုတျရပါဘူးသားရယျ ဒါတှကေ မမေရေဲ့အဖွဈခငျြဆုံးအိမျမကျတှေ မဟုတျပါဘူးသား။@သားလေးရဲ့ ခကျခကျခဲခဲ အောငျမွငျခဲ့ရတဲ့ သာမဏကြေျောအလင်ျကာရဘှဲ့ရတာရယျ၊@သားရဲ့ စာသငျ.စာခဆြရာတျောတှကေို ဗုဒ်ဓဘာသာနှငျ့ဆနျ့ကငျြဘကျအသှငျရှိတဲ့ နိုငျငံသို့ ပငျ့ဆောငျပူဇျောခှငျ့ရခဲ့လို့ပေါ့။
အငျဒိုသာမဏကြေျောရဲ့မိခငျနရောမှာ စိတျကူးပုံဖျော ရေးဖှဲ့ပါသညျ။အလင်ျကာရပူဇျောပှဲ အမှတျတရအနနေဲ့ပါငယျခငျြး။(ပညာစကျဝနျး) ၈:၃၆။၃၀၊၁။၂၀၁၈။Credit-myanmarlibary
ရေဘေးအကြောင်းပြပြီး အလှူခံ လုပ်စားနေကြသူများ
“အိမ်မှာနေတဲ့ ဇနီးသည် ရဲ့ ဘဝကို CCTV တပ်ပြီးမှ သိခဲ့ရတဲ့ ခင်ပွန်း ဖြစ်သူရဲ့ အဖြစ်”
တကယ်ဖူးမြော်ရခက် ပြီးအင်မတန်တန်ခိုးကြီးတဲ့ဝဋ်ကြွေးတော်ပြည့်ဘုရား